Facebook မွာ Schedule လုပ္ၿပီး ဘယ္လို ပို႔စ္ တင္မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
Facebook မှာ Schedule လုပ်ပြီး ဘယ်လို ပို့စ် တင်မလဲ ?
Facebook Page များမှာ ပို့စ်များကို Schedule လုပ်ပြီး တင်နိုင်ပေမယ့် အကောင့်များမှာတော့ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ Facebook အကောင့်ကနေ Schedule လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်ခြင်းကြောင့် ရရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ ည ၁၂ အထိ စောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလို Schedule လုပ်ဖို့အတွက် Third-Party Website တစ်ခုကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
https://app.postfity.com/create ဝက်ဆိုက်ကို သွားပါ။ “ Login with your favourite network: “ မှာ Facebook ကို နှိပ်ပါ။ နောက်အဆင့်မှာ Continue as ကို နှိပ်ပါ။ နောက်အဆင့်များမှာ OK ကိုသာ နှိပ်ပါ။
ဝက်ဆိုက်ထဲ ပြန်ရောက်သွားရင် ဘယ်ဘက်မှ သင့်ပရိုဖိုင် ပုံကို နှိပ်ပြီး ချိတ်ဆက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ စာသားများ ရေးပါ။ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှ Schedule ကို နှိပ်ပါ။
အချိန်၊ နေ့ရက်များ သတ်မှတ်ပြီး Schedule ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ ပို့စ်ကို သင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ အလိုအလျှောက် ပို့စ်တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။